Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Israel Na -agbasa Akụkọ » UAE Embassy na Israel bu ihe omuma ohuru nke Udo
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
by Usoro Media
Bulite ọkọlọtọ UAE na Israel
dere Usoro Media
N'oge na-adịghị anya gara aga, egosighi Israel na maapụ gọọmentị na United Arab Emirates. Taa ndị UAE mepere ụlọ ọrụ nnọchite anya ha na Tel Aviv, Israel, na-akpọ ya ihe ngosi ọhụrụ nke udo.
United Arab Emirates raara onwe ya nye nke nnọchi anya ya na Tel Aviv
Nke a bụ mmalite. Na ụwa anyị post-COVID, ndị na-ewepụta ihe ọhụrụ ga-eduga.
Onye isi ala Israel bụ Isaac Herzog sonyeere onye nnọchi anya UAEMohamed Al Khaja na igbutu rịbọn iji mepe ụlọ ọrụ nnọchite anya mba ahụ.
United Arab Emirates raara onwe ya nye nke nnọchi anya ya na Tel Aviv.
“Embassylọ ọrụ nnọchiteanya a ga-abụ ọ bụghị naanị ụlọ maka ndị nnọchi anya gọọmentị kamakwa ntọala maka ọrụ anyị iji wee na-ewulite mmekọrịta ọhụrụ anyị, ịchọ mkparịta ụka, ọ bụghị esemokwu, iwulite usoro udo ọhụrụ, ma nye ihe atụ maka ọhụụ Mkpakọrịta ọnụ na mkpebi esemokwu na Middle East, "onye nnochite anya UAEMohamed Al Khaja kwuru na ụtụtụ Wenezde n'ihu ụlọ ọrụ nnọchi anya ọhụrụ, nke dị na ụlọ Tel Aviv Stock Exchange.
“Ebe ọ bụ na njikọ nke njikọ dị n’etiti Israel na UAE, anyị ahụla - na nke mbụ - mkparịta ụka banyere azụmaahịa na ohere itinye ego, mmekọrịta dị n’etiti ụlọ ọgwụ, mahadum na ebe nyocha, mmekọrịta ngbanwe ọdịbendị na nke ndị mmadụ, imekọ ihe ọnụ na ịlụ ọgụ COVID-19, igbochi iyi egwu cyber, na ichebe gburugburu ebe obibi anyị. Anyị bịanyere aka na nkwekọrịta dị iche iche n'akụkụ dị iche iche, gụnyere akụ na ụba, njem ụgbọ elu, teknụzụ, na ọdịbendị, "Khaja kwuru.
“Ma nke a bụ mmalite. Na ụwa anyị mgbe e mechara COVID, ndị na-agbanwe ihe ọhụrụ ga-eduga, "ọ kwukwara, na-agbakwụnye, sị:" UAE na Israel bụ mba na-agbanwe agbanwe. "
France mara ọkwa COVID maka ụlọ mmanya, ụlọ nri ...
Eziokwu Mgbanwe Ihu Igwe maka Florida Condo Collapse ...